Format Factory v3.3.4 Update(Full version) ~ mgkhainghtoo
23:11 မောင်ခိုင်ထူး No comments
ကဲ Format Factory ဆိုရင် မသိသူမရှိလောက်အောင်ကို နာမည်ကြီးပါတယ်။အခု့တော့ update အသစ်ထွက်လာလို့ ပြန်မျှဝေလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကဲကဲ မသိသေးဘူးဆိုရင်လည်းနည်းနည်းပြောပြမယ်နော်။အင်တာနက်ကနေ video တွေ သီချင်းတွေကို သူငယ်ချင်းတို့က ဒေါင်းလိုက်ကြမယ်ဆိုပါစို့။
ဒေါင်းထားတဲ video တွေကို mobile ဖုန်း, DVD Player တို့မှာ ပြန်ကြည့်ချင်တဲ့ အခါformat မကိုက်တာတွေဖြစ်တက်တယ်။ Format မကိုက်ဘူးဆိုတာက
ဒေါင်းထားတဲ့ video ရဲ့ Format က AVI တို့ RMVB စသဖြင့် ဖြစ်နေမယ်။ကိုယ်က အဲ့ဒါကို ဖုန်းထဲမှာ ထည့်ပြီးတော့ ပြန်ကြည့်တဲ့အခါ Player က အလုပ်လုပ်တော့ဘူး။Player တွေက Format အကုန်လုံးကို အလုပ်လုပ်မနိူင်ဘူးလေ။အဲ့ဒီတော့ အဆင်ပြေမယ့်
Format ကိုသွားရမယ်။ဥပမာ 3gp တို့ mp4 တို့ စသဖြင့် မိမိဖုန်းက support လုပ်ပေးမယ့်
format ပြောင်းပေးမှ ကြည့်လို့ရပါမယ်။ DVD Player မှာကြည့်ချင်ရင်လည်း ဒီလိုပါပဲ။
usb pendrive ကို dvd player မှာ ထိုးပြီးကြည့်ရမယ်။အဲ့ဒါဆိုရင် DVD တော်တော်များများကတော့
mpg နဲ့ vob ကို ထောက်ပံပေးပါတယ်။ mpeg1 နဲ့ mpeg 2ကလည်း အတူတူပါပဲ။အဲ့ဒီ Format တွေကိုပြောင်းပေးမှ dvd player မှာ ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကြည့်လို့ရမှာပါ။
နောက်တခု့ ကျနော် စမ်းဖူးတာကတော့ နိူင်ငံခြားဇာတ်လမ်းတွေကို မြန်မာ စတန်းထိုးပြီးကြည့်လို့ရမယ့် Format ကို ပြောင်းလို့ရပါတယ်။ window 8 မှာတော့ setting တွေကို>မြန်မာလို ကောင်းစွာကြည့်ရှု့လို့ရပါတယ်။စမ်းချင်တယ်ဆိုအောက်မှာ ဝင်ယူသွားလိုက်ပါ။
Format Factory isamultifunctional media converter.Provides functions below:All to MP4 / 3GP/ MPG/ AVI/ WMV/ FLV/ SWF. All to MP3 /WMA /AMR /OGG /AAC /WAV. All to JPG/ BMP/ PNG/ TIF/ ICO/ GIF/ TGA.Rip DVD to video file , Rip Music CD to audio file. MP4 files support iPod/iPhone/PSP/BlackBerry format.Supports RMVB,Watermark, AV Mux.
Convert all type of video file to MP4/3GP/MPG/AVI/WMV/FLV/SWF
Convert all type of audio file to MP3/WMA/AMR/OGG/AAC/WAV
Convert all type of photo file to JPG/BMP/PNG/TIF/ICO/GIF/TGA
Rip DVD to video file and rip music CD to music file
Support from different portable devices like:iPod/iPhone/PSP/BlackBerry
Support from RMVB, Watermark, AV Mux
Pictures Zoom,Rotate/Flip,tags ability
Damaged video and audio file repairing
Reduce size of multimedia files
Compatible with all editions of windows